Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021) – Gold Channel Movies
Video Sources 13701 Views Report Error
Hitman’s Bodyguard ရဲ့ အဆက် Hitman’s Wife’s Bodyguard ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။
ဒုတိယမြောက်ကားမှာတော့ လိုင်စင်ဆုံးသွားတဲ့ မိုက်ကယ်က ဒီပျက်ရှင်တွေဝင်ပြီး ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေချိန်မှာတော့ ဒါရီးရက်စ်တစ်ယောက်က မိန်းမဖြစ်သူနဲ့ နှပ်ဖို့ ဟန်းနီးမွန်းကို ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ ဟန်နီးမွန်းပထမညမှာ ဘုတောင်မဘုလိုက်ရဘဲ ဒါရီးယက်စ်တစ်ယောက် အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ မာဖီးယားလက်ကနေ ယောကျ်ားကိုကယ်မယ်ဟဲ့ ဆိုပြီး မိုက်ကယ်ကို ဆိုနီယာကသွားခေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့ ဒီသုံးယောက် ဘယ်လိုတွေပေါက်ကရလုပ်မလဲဆိုတာကို ရှုစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ Samuel L. Jackson ရဲ့ Motherfucker ကို လှိုင်လှိုင်ကြားရမယ့်အပြင် ကလေးတွေနဲ့ မသင့်တော်တဲ့စကားတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက် ရှောင်ရှားပြီးကြည့်ပေးပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
WillSeptember 6, 2021Reply
Look at my web page: of asmr (http://j.mp/)
EvelynSeptember 5, 2021Reply
Hello scoliosis surgery there!
Quick question that’s completely off topic. Do you know how
LilySeptember 4, 2021Reply
Feel free to surf to my web-site – your asmr (bitly.com)
GenieSeptember 2, 2021Reply
Feel free to surf to my website :: an asmr, j.mp,
RichieSeptember 1, 2021Reply
Hi to every body, it’s my first payavisit of this website; this website consists asmr of
[j.mp] remarkable and genuinely good data in favor
SantoAugust 30, 2021Reply
Also visit my webpage; quest bars on (http://bit.ly/)
IsobelAugust 28, 2021Reply
Feel free to visit my site web hosting an